FITENY VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy vahiny - Fampidirana - Fizarana 1 - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
The Fiteny vietnamiana dia ny teny fampitana fifandraisana amin'ny vahoaka Vietnamianina ary koa ny tenin-drazana of Olona Viet (nantsoina koa hoe Kinh, ilay foko foko lehibe any Vietnam). Ny fananganana fiteny iraisana ampiasain'ny olona iray manontolo dia asa mafy tokoa noho ny fahasamihafan'ny fiteny sy ny accent. vietnamiana dia miorina amin'ny vaninteny mihetsiketsika ary accent tohina. lantom-peony dia manana anjara toerana lehibe hatao amin'ny fanampiana ny fanavahana sy hamantatra ny dikan'ireo tonony. Betsaka koa ny accent ao amin'ny Fiteny vietnamiana, izay anisan'ireo malaza indrindra sy tiana indrindra dia ilay Atsimo. Io lozam-pifandraisana io dia toa endrika hafa amin'ny fenitra mahazatra satria ny fanononana azy dia miorina mafy amin'ny tsy fitandremana ny feo mahazatra ary koa ny fitsipi-pitenenana. Vietnamianina dia fiteny monosyllabika miaraka amin'ny feo tsirairay voatanisa mitondra dikany manokana. Ary koa, manolotra teny mitambatra tsy tambo isaina amin'ny teny mitambatra, izay ahitana 2, 3 na ho an'ny feo tokana miompana.
The Fiteny vietnamiana noforonina sy novolavolaina nandritra ny taonjato maro ankehitriny. Ireo antontan-taratasy momba ny tantaram-pirazandrano feudal dia nampiasa ny sinoa fa tsy hatramin'ny nahaterahan'i anarana [Nom] (Script demaokratika) fiteny tamin'ny taonjato faha-14 dia nampiasaina tamin'ny fiteny sy ny soratra, indrindra tamin'ny famoronana literatiora. Tamin'ny taonjato faha-17 vietnamiana na ny fiteny nasionaly dia efa nisy. Ny fiaviany dia mifamatotra be dia be amin'ny mpamboly portogey, espaniola, italiana ary frantsay izay miasa any amin'ireo firenena any Azia atsimo atsinanana.
Script Han Nom (Loharano: Ianaro Forum)
Ireo dia namorona script vaovao ho fanoratana ny Fiteny vietnamiana. Ireo mpandray anjara tena mahavariana amin'ny fananganana sy fandalinana Vietnamese tamin'izany fotoana izany dia mpisolo toerana frantsay iray Alexandre de Rhode1 miaraka amin'ny famoahany ny iray amin'ny rakibolana Vietnam sy ny fitsipi-pitenenana antsoina hoe Vietnamese – Portuguese-Latin Dictionary. Tamin'ny voalohany, vietnamiana dia natao fotsiny ho an'ny tanjon'ny fampielezan-kevitra fa tsy ela dia nihaona tamin'ny fomba ofisialy rehefa nametraka ny fanjanahanany tany Vietnam ny vahoaka frantsay. Ho an'ireo mpanitatra sasany, vietnamiana tany am-boalohany dia fitaovana hitondra ny mpanjanaka, fa avy eo, noho ny fahafaham-po, vietnamiana lasa malaza. Ankoatr'izay, ny rafitra sy ny abidia dia mora mamela ny tsikera rehetra.2, 3
vietnamiana (tiếng Việt, na kely tsy mahazatra Việt ngữ) dia ny -pirenena ary fiteny ofisialy an'ny Vietnam. Io no fiteny renin 'i 86% an'ny mponina Vietnam, ary manodidina ny telo tapitrisa Vietnamese any ampitan-dranomasina. Izy io koa dia miteny amin'ny fiteny faharoa an'ny foko vitsy an'isa Vietnam. Ampahany amin'ny Fianakaviana fiteny Austroasiatika4, izay manana ny mpandray anjara be indrindra amin'ny sisiny lehibe (imbetsaka lehibe kokoa noho ny fiteny Austroasiatic hafa izay natambatra). Sefo Voambolana Vietnamianina nindramina tamin'ny teny sinoa, ary taloha no nanoratana tamin'ny alàlan'ny rafitra fanoratana sinoa, na izany aza amin'ny endrika novaina ary nomena fandikana vernacular. Amin'ny maha-vokatry ny fanjanahan-tany frantsay, ny fiteny dia mampiseho ny fiantraikany amin'ny teny frantsay sy ny Rafi-panoratana Vietnamianina (quốc ngữ) ampiasaina ankehitriny dia dikan-tenin'i Albaney latinina, miaraka amin'ny diacritics fanampiny ho an'ny tonony sy ny litera sasany.
Araka ny fiteny nasionaly avy amin'ny vondrom-poko maro an'isa, vietnamiana dia miteny manerana an'i Vietnam ny Vahoaka Vietnamese, ary koa avy amin'ny foko vitsy an'isa. Izy io dia ampiasaina any amin'ireo vondron'olona Vietnamianina any ivelany, indrindra indrindra any Etazonia, izay misy mpiteny iray tapitrisa mahery mahery ary izy no fiteny fahafaha-miteny indrindra (faha-3 any Texas, faha-4 ao Arkansas sy Louisiana ary faha-5 any Kalifornia). Any Aostralia, no fiteny fahenina be mpiteny indrindra.
Araka ny Ethnologue, vietnamiana olona maro ihany koa no miteny ao Kambôdza, Kanada, Sina, Côte d'Ivoire, Repoblika Tseky, Failandy, France, Alemana, Laos, Martinique, Netherlands, New Caledonia, Norvezy, Filipina, Federasiona Rosiana, Senegal, Taiwan, Thailand, Angletera, ary Vanuatu.
"Tamin'ny voalohany, raha misy feo ary mizara voambolana lehibe amin'ny Shinoa ny Vietnamianina dia natambatra ho Sino-Tibetan izany". Taty aoriana dia hita fa ny tononny Vietnamianina niseho vao tsy ela (André-Georges Haudricourt-1954)5 ary ny voambolana toa ny Sinoa koa dia nindramina avy amin'ny Han Shinoa nandritra ny tantaran'izy ireo (1992); ireo lafiny roa ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny niandohan'ny Vietnamese. vietnamiana avy eo dia nosokajiana tao amin'ny Kam-Tai subfamily of Daic miaraka amin'i Zhuang (ao anatin'izany i Nùng sy Tày any Vietnam Avaratra) sy Thai, taorian'ny nanesorana ny fitaoman'ny sinoa. Na izany aza Toetoetra nindramina tamin'ny Zhuang amin'ny tantaran'izy ireo ela be mpiray vodirindrina (Andre-Georges Haudricourt), fa tsy lafiny fanao tany Vietnamianina. Farany, vietnamiana nosokajiana tao amin'ny Austroasiatika fianakaviana linguistic4, ny Mon-Khmer fianakaviana, Viet-Moung sampana (1992) rehefa vita ny fampianarana bebe kokoa. Kinh no mponina betsaka indrindra any Vietnam. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Fudan University 2006 dia an'ny Mon-Khmer mahay fiteny, fa tsy misy teny farany momba ny fiaviany.
Henri Maspero6 nitazona ny Fiteny Vietnamianina of -Thai Origin, sy ny Ray Mpanaja Souvignet nanitsy azy tao amin'ny Indo-Malay vondrona. AG Haudricourt5 nandà ny ny tesis de Maspero6 ary namintina fa Vietnamianina dia napetraka tsara amin'ny fianakaviana Austroasiatic. Tsy misy amin'ireo teoria ireo fa manazava ny niandohan'ny Bokin'i Môrmôna Fiteny vietnamiana. Na izany aza, na izany aza, dia mbola mijanona ho azo antoka: tsy fiteny madio ny Vietnamianina. Toa mifangaro amin'ny fiteny maro, taloha ary maoderina, nifanena nandritra ny tantara taorian'ny fifandraisan'ny firenena vahiny sy ny Vietnam.
Raha miteny amin'ny Vahoaka Vietnamese ho an'ny millennia, voasoratra vietnamiana tsy lasa fiteny ofisialy any Vietnam hatramin'ny taonjato faha-20. Ho an'ny ankamaroan'ny tantarany, nampiasa ilay sinoa klasika an-tsoratra nosoratan'ny sinoa antsoina hoe Vietnam. Tamin'ny taonjato faha-13 anefa dia namorona ilay firenena Chữ nôm, rafitra fanoratana mampiasa ny tarehin-tsoratra sinoa misy singa phonetic mba hifanaraka tsara amin'ireo tonony mifandraika amin'ny fiteny Vietnamese. Chữ nôm dia noporofoina fa mahomby kokoa noho ireo toetran'ny sinoa kilasy izay nampiasaina tamin'ny taonjato faha-17 sy faha-18 ho an'ny poezia sy ny literatiora. Chữ nôm dia ampiasaina ho an'ny tanjona fitantanan-draharaha mandritra ny fotoana fohy Hồ ary Tây Sơn Dynasties7. Nandritra ny fanjanahan-tany frantsay, nanongana ny sinoa ny fitondrana sinoa. Efa tamin'ny fahaleovantenan'i Frantsa no nampiasana ofisialy ny Vietnamese. Io no fiteny amin'ny fampianarana any amin'ny sekoly sy oniversite ary fiteny ho an'ny orinasa ofisialy.
Toy ny firenena Aziatika maro hafa, vokatry ny fifandraisana akaiky amin'i Shina mandritra ny an'arivony taona maro, ny ankamaroan'ny vietnamiana Lexicon mifandraika amin'ny siansa sy politika dia avy amin'ny sinoa. Farafahakeliny 60% amin'ny tahiry lexical no manana Sinoa, tsy tafiditra ao Shina, na dia betsaka aza ny teny mifangaro. Teny Vietnamianina natambatra tamin'ny mpampindram-bola sinoa. Matetika ny olona iray dia afaka manavaka ny tenin'andriana Vietnam iray ary ny Sinoa mindram-bola raha toa ka mety havaozina izany na tsy miova ny dikany rehefa niova ny feo. Vokatry ny fanjanahana frantsay, Vietnamita dia efa maro ny teny nindramina tamin'io Fiteny frantsay, ohatra ny kafe (avy amin'ny teny frantsay kafe). Amin'izao fotoana izao, teny vaovao maro no ampiana amin'ny leksikon'ilay fiteny noho ny fitaoman-kolontsaina tandrefana mavesatra; matetika nindramina amin'ny teny anglisy ohatra TV (na dia matetika hita amin'ny endrika voasoratra as tivi). Indraindray ireo fampindramam-bola ireo dia nadika ara-bakiteny ho an'ny Vietnamese (ohatra, ny logiciel dia asiana ph inton mềm, izay midika ara-bakiteny hoe "ampahany malefaka").8
◊ Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Abidia Vietnamianina - Fizarana 2
◊ Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Consonants Vietnamianina - Fizarana 3
◊ FITENY VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy vahiny - feon Vietnamese - Fizarana 4
◊ Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Consonants Vietnamianina - Fizarana 5
1 Alexandre de Rhodes, SJ [15 March 1591 any Avignon, fanjakana papaly (izao any France) - 5 Novambra 1660 tany Isfahan, Persia] dia misiônera zezoita avy any Avignonis ary nanao fiatraikany maharitra teo amin'ny Kristianisma tany Vietnam. Izy no nanoratra ny Diksionera Annamiticum Lusitanum et Latinum, rakibolana Vietnamese-Pôrtogey-Latina misy fiteny telo voalohany, navoaka tao Roma, tamin'ny 1651.
2 Loharano: Lac Viet Computing Corporation.
3 Loharano: IRD New Tech.
4 Ireo fiteny Austroasiatika, fantatra ihany koa amin'ny hoe Mon – Khmer, dia fianakaviana miteny lehibe any Azia atsimo atsinanana, ary miparitaka eran'ny faritra India, Bangladesh, Nepal ary atsimon'i Shina ihany koa. Manodidina ny 117 tapitrisa ny mpandahateny amin'ny fiteny Austroasiatika. Amin'ireto fiteny ireto dia ny Vietnamianina, Khmer ary Mon ihany no manana tantara efa voarindra efa ela ary Vietnamianina sy Khmer irery ihany no manana ny toerana ofisialy ho fiteny nasionaly maoderinaany Vietnam sy Kambodza, tsirairay avy).
5 Andre-Georges Haudricourt17 Janoary 1911 tany Paris - 20 Aogositra 1996 tany Paris) dia botanista frantsay, antropolojika ary mpandika teny.
6 Henri Paul Gaston Maspero (15 Desambra 1883 tany Paris - 17 martsa 1945 tany amin'ny toby fitanana Buchenwald, Weimar Nazi Germany) dia biolojista sy profesora frantsay izay nandray anjara tamin'ny lohahevitra isan-karazany mifandraika amin'i Azia Atsinanana. Maspero dia fantatry ny be indrindra amin'ny fianarany amin'ny fianaran'ny mpisava lalana ny Daoism. Nogadrain'ny Nazia izy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ary maty tany amin'ny toby fitanana tany Buchenwald.
7 Ilay anarana Tây Sơn (Nhà Tây Sơn 家 西山) dia nampiasaina tamin'ny tantaran'ny vietnamiana tamin'ny fomba maro samihafa hanondroana ny vanim-potoana fikomian'ny tantsaha sy ny tarana-mpanjaka itsinjaram-pahefana napetraka teo anelanelan'ny faran'ny tarana-mpanjaka Lê tamin'ny 1770 sy ny fiandohan'ny tarana-mpanjaka Nguyễn tamin'ny 1802. Ny anaran'ny mpitarika ny mpikomy ny distrika an-trano, Tây Sơn, dia natolotra ho an'ny mpitarika ihany (ireo rahalahin'i Tây Sơn: ie, Nguyễn Nhạc, Huệ, ary Lữ), ny fikomian'izy ireo (ny Fanabeazana Tây Sơn) na ny fitondrany (ny [Nguyễn] Tây Sơn dynastie).
8 Loharano: The Wikipedia Encyclopedia.
Image Sary lohateny - Loharano: vi.wikipedia.org
◊ Fanondroana, lahatsoratra sahisahy, lahatsoratra italiana amin'ny sary bracket sy sepia dia napetrak'i Ban Tu Thu - www.hitoriam.com
(Visited 5,354 fotoana, 6 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny nahaterahan'i Vietnam - Fampidirana - Fizarana 1
FITENY VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy vahiny - Fizarana 2 →
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,965)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,773)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (4,761)
SPRING SCROLLS - Fizarana 2
Comments Off amin'ny SCROLLS SPRING - Fizarana 2
Fitsidihana anio: 314
Andro farany 7 nitsidika: 2,289
Total visits: 420,540